Dowladda oo cambaareysay qaraxii dadka badan ku dhinteen ee ka dhacay Xaawo Cabdi | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Dowladda oo cambaareysay qaraxii dadka badan ku dhinteen ee ka dhacay Xaawo...
Dowladda oo cambaareysay qaraxii dadka badan ku dhinteen ee ka dhacay Xaawo Cabdi
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay qaraxii maanta ka dhacay agagaarka Isbitaalka Xaawo Cabdi ee duleedka Magaalada Muqdisho, ee lala eegtay gaarigii rakaabka siday.
Gaariga oo ka tagey Isgoyska Ex Control Afgooye ee Magaalada Muqdisho, kuna sii jeeday Degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabellaha Hoose ayuu qaraxan ku haleelay nawaaxiga Isbitaalka Xaawo Cabdi, waxaana ku dhimatay 6 qof, halka 14 kalana ay ku dhaawacantay.
Qoraal ka soo baxay Dowladda Somaliya ayaa lagu cambaareeyay falkaasi wuxuushnimada leh, iyadoo dhinaca kalana ay dowladda uga tacsiyadeysay qoysaska dhibane-yaasha.
“Dowladda waxay tacsi tiiraanyo leh u direysaa qoysaska iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen dadkii ku shahiiday weerarka bahalnimada ah ee kooxaha naf lacaariga ah ee ay ku qaadeen gaariga dadweynaha ee marayay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye,dhammaan dadkaas shuhadada ah waxaan u rajeyneynaa inuu Alle siiyo naxariisto janno inta dhaawac ah Alle u boogo dhayo.” ayaa lagu yiri qoraalka.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Falkan arxan darada ah wuxuu cadeyn u yahay sida kooxaha calooshood u shaqeysatayaasha ah ee ka macaasha daadinta dhiiga shacabka Soomaaliyeed ay markasta ugu hamuun qabaan baabi’inta dadka si aan kala sooc lahayn.”
“Dowladda Soomaaliyeed oo kaashaneysa shacabka Soomaaliyeed waxay ku rajo weyn tahay in guul laga gaaro dagaalka lagu soo afjarayo kooxaha argagaxisada, diinlaawayaasha ah ee danta ka dhex arkay bur burinta dadka iyo baabi’inta umadda.”